HomeWararka Ciyaaraha MaantaQorshaha Willian uu ka doonayo kooxda Arsenal oo la helay
Willian ayaa lagu soo waramayaa inuu si firfircoon u doonayo inuu ka tago Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkaan, inkastoo uu heysto labo sano oo kale si uu ugu sii joogo kooxda.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa si bilaash ah ugu biiray Arsenal bishii Ogosto ee la soo dhaafay ka dib markii uu ku guuldareystay inuu heshiis la gaaro heshiis kordhinta kooxda Galbeedka London ka dhisan ee Chelsea.
Willian, oo lagu xamanayo inuu qaadan doono adduun dhan around 150,000-toddobaadkii, ayaa ku dhibtooday ololihiisii ​​ugu horreeyay ee Emirates Stadium, waxaana uu haatan doonayaa inuu ka baxo.
Athletic ayaa ku warameysa in 32 jirkaan uu rajeynayo in koox kale ay u soo bandhigto xiisaha ay u qabto marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha soo socota.
Afar ciyaaryahan oo kale oo Arsenal ah ayaa la sheegay inay ku jiraan xaalad la mid ah, dhanka kale, iyadoo Bernd Leno , Granit Xhaka , David Luiz iyo Hector Bellerin ay diyaar u yihiin inay kooxda ka tagaan.
Arsenal ayaa 1-0 ku garaacday Chelsea ciyaar ka dhacday Stamford Bridge fiidnimadii Arbacada iyagoo soo galay kaalinta sideedaad ee Premier League.